Sida loo xaliyo dhibaatooyinka isku xirnaanta Bluetooth ee iOS 10 | Wararka IPhone
Waxaan ku sii wadaynaa liistadayada wanaagsan ee cattails si aan u xallino dhibaatooyinka hawlgalka ee macruufka 10.Si kastaba ha noqotee, Apple waxay sii wadaa inay ka shaqeyso cusbooneysiinta, sidaad ogtahay, kooxda horumarinta Cupertino ayaa dhowaan soo dirtay casriyeyn lagu xallinayo qaar ka mid ah dhibaatooyinka isku-dhafan ee iOS, si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira weli cilladaha qaarkood ee ka hortagaya inuu qalabku si sax ah u shaqeeyo. Maanta oo Axad ah waxaan rabnaa inaan ku tusino sida loo xaliyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka isku xirnaanta Bluetooth ee la yimid iOS 10. Iskusoo wada duuboo, dhibaatadani waxay keenaysaa jaritaan jabin marka aan isticmaalno sameecadaha Bluetooth ama sameecadaha leh isla teknoolojiyada gudbinta.
Sida had iyo jeer ah, waxaan kugula talineynaa inaad qaaddo talaabooyin hore si aan u hubino inaanan waxba naga lumin. Si fiican u aqri tilmaamaha, hana qaadin wax talaabo ah oo abuureysa shaki nooc kasta ah ama aadan fahmin. Samee kayd, ama iCloud ama iTunes, sidaa darteed waxaan hubin doonnaa in la beddelo goobaha aan ku soo celin karno aaladda qaabkeedii hore oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabahayaga. Ugu dambeyntiina, haddii aad wax su'aalo ah qabtid, tag sanduuqa faallooyinka, bulshadayada akhristayaasha ah, iyo sidoo kale tifaftireyaasha, ayaa kaa caawin doona sida ugu macquulsan, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in lala kaashado casharrada noocan ah.
1 1. Demi Bluetooth-ka oo dib-u-dhis ku samee nidaamka
2 2. Iska ilow qalabka Bluetooth oo dib u xir
3 3. Soocelinta goobaha shabakada
4 4. Baadhista aaladda Apple
1. Demi Bluetooth-ka oo dib-u-dhis ku samee nidaamka
Bluetooth waa farsamada siineysa guuldarooyin dheeri ah macruufka 10aad. Waxaan isku dayeynaa kan ugu horeeya uguna cad cad ee qaababka caadiga ah ee lagu xaliyo waxyaabaha aduunka ka jira xisaabinta, reboot Ugu horreyntii waxaannu damineynaa Bluetooth, ama Xarunta Xakamaynta ama codsiga Settings, adigu waad go'aansaneysaa. Kadib, waxaan dib u bilaabi doonnaa qalabka, tan waxaan u riixeynaa badhanka Hoyga iyo badhanka awoodda qalabka iPhone 6s gadaal, Xaaladda iPhone 7, dib-u-bilaabashada waxaa sababay adoo riixaya mugga hoos iyo badhanka Power.
Marka qalabka dib loo howlgeliyo, waxaan hubin doonaa inuu shaqeynayo, sidaa darteed waxaan bilaabi doonnaa Bluetooth oo waxaan isku dayi doonnaa inaan dib u xirno aaladda dhibaatada nagu haysay.
2. Iska ilow qalabka Bluetooth oo dib u xir
Suurtagalnimada kale ee dib loogu dhisi karo ku xirnaanta aaladda Bluetooth waa in la isticmaalo "aaladda illooba" oo dib loo laabo. Tan waxaan u aadeynaa barnaamijka Settings iyo dabcan menu-ka Bluetooth. Gudaha waxaan ku arki doonnaa liiska aaladaha aan ku lammaannay iPhone-ka, sidaa darteed waxaan raadineynaa midka na xiiseynaya oo waxaan gujin doonnaa «i» waxayna geli doontaa macluumaadka qalabka. Qeybta hoose waxaan ku arki doonaa suurtagalnimada «olvidar qalab«Shaqadii aan raadineynay miyaa iyo tan aan dooran doonno. Hadda qalabka waa laga jari doonaa, sidaa darteed waa inaan mar labaad isku lamaannaa sidii caadiga ahayd. Guud ahaan, tani waa ikhtiyaarka u shaqeeya inta ugu badan dhammaan wixii hore loo soo sheegay.
3. Soocelinta goobaha shabakada
Waa inaan ka digno in xaaladaha badankood, dib-u-dejinta goobaha shabakaddu ay naga dhigeyso inaan luminno ereyada sirta ah ee iCloud Keychain. Shaqadani waxay dib u dejin doontaa Bluetooth, WiFi iyo goobaha isku xirnaanta xogta moobilka. Waxaan xusuusan nahay in goobihii ugu dambeeyay ee shabakada wadaha ee bixiya adeegga sidoo kale la tirtiri doono, laakiin waxba ma dhacaan, waxay na weydiin doontaa inaan dib u cusbooneysiino isla marka aan ku bilowno aaladda SIM la geliyay. Sidaa darteed, waxaan u tagi doonnaa arjiga Dejinta si aan u dooranno xulashada Guud. Dhamaadka ugu dambeeya waa Reset menu, halkaas oo aan ka helno xulashooyinka dib loogu soo celiyo macruufka qalabka. Ka mid ah dejinta dib u dejinta waxaan ka heliDib u deji dejimaha shabakadda«, Waan riixeynaa oo waan raaci doonaa tilmaamaha.
4. Baadhista aaladda Apple
Baadhitaanku waa hab ay tahay in shaqaalaha Apple ay si dhakhso ah ugu helaan cilladaha qalabka ee qalab iOS ah, aniga laftayda ayaan dhibaatooyinkan kala kulmay Bluetooth-kayga iPhone 6s ka iyo baadhitaanka lagu sameeyay Apple Store waxay ka digtay khaladaadka ku jira Bluetooth-ka. Waxaa jira laba qaab oo loo codsado cudurkaIyadoo loo marayo «Apple Chat», ama si toos ah u codsaneysa booqashada SAT ee Dukaanka Apple, waxaan ku sameyn doonnaa ogaanshaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo xaliyo dhibaatooyinka isku xirnaanta Bluetooth ee iOS 10
Waxaan xiiseynayaa macluumaadka tan iyo wixii ka dambeeyay cusbooneysiintii ugu dambeysay ma xiriirin karo iPhone 6S-ga IPAD-ga. Waxaan isku dayay dhammaan talaabooyinka la soo jeediyay, laakiin xaaladdu waa isku mid. Waxyaabaha cajiibka ah ayaa ah in iPhone uu ku xirmayo aalado kale (kuwa ku hadla / gawaarida gawaarida). Sideen usii wadi karaa? Salaan!
Ku soo jawaab Noelia Herrero
Kaalay, si la mid ah had iyo jeer laakiin waxaan dhignaa "IOS 10" waxayna umuuqataa maqaal cusub ... Ugu yaraan qaar ka mid ah ayaa kuu adeegi doona haddii aadan waligaa akhrin sida loogu qasbo dib u bilaabid iPhone 7.
Labadaba gacmo-la’aan iyo dhaga-dhegaha labaduba si fiican ayey ugu shaqeynayeen iphone-kayga 6-aad, hada 7-da ayaan macquul aheyn, wixii talo bixin ah
Ku jawaab Rene Stefano
Waxa kaliya ee dhibaatada i xaliyay aniga ayaa ah inaan rakibo nooca 6 laakiin nooca ugu da'da weyn ee 10.1.1s oo lagu daray maadaama ay jiraan laba isku mid ah. Weli waxaa saxiixay Apple sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso maaddaama ay aniga i xalisay.
Xalay 10/11, waxaan cusbooneysiiyay macruufka 11.1.1 taleefankayga iphone 7 iyo qalabkeyga bilaashka ah ee Patronics oo shaqeynayay. maanta ma aqoonsana inkasta oo Bluetooth uu shaqeynayo
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad ku xidhi kartid iPhone 8 Plus afhayeenka Sony kaliya adoo ku taabanaya codsi ku saabsan iPhone sida moobilada 'Sony xperia z3 NFC' ayaa leh, fadlan haddii aad taqaanno sida loo sameeyo, fadlan u sheeg ii salaan ka Extremadura
Adobe Lightroom waxay horey u taageertay qaabka RAW
Xog daadis ah ayaa muujineysa sida Google loogu ciqaabi karo Midowga Yurub